EP Couple MM – TakeshiCo
ခိုင်ခံ့ အကြမ်းခံ မီတာ 100 ထိ ရေစိုခံတဲ့ နာရီ !
စုစုပေါင်းဈေးနှုန်း 121,000 Ks
ယနေ့ အထူးလျှော့ဈေး 53,000 Ks !!
အကြီးဆိုဒ် 1 လုံး ဝယ် အသေးဆိုဒ် 1 လုံး အပိုရရှိ စုစုပေါင်း2လုံးရှိပြီး အသည်းပုံဗူး 1 ဗူးပါ ရရှိပါသေးသည်
တန် မှ တန်!
၀န်ဆောင်မှုအပြည့် ၁ နှစ်တိတိအာမခံပေးပါတယ် !
နောက်ထပ်အပို ရေစိုခံ ရောဂါများကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ မျက်မှာဖုံး ( Mask )5ခု Cotton Silk 500T with micron level coating မှထုတ်လုပ်ပါသည် (SWITZERLAND Standard OEKOTEX 100-2019 coating!) ထိုင်းနိုင်ငံအရောင်းကောင်းဆုံး
" နာရီလေးတော့သဘောကျတယ်ဗျာ delivery ပိုင်းမစိုးဘူး 2-3 ရက်တည်းနဲ့ရောက်တယ် ဘော်ဒီလဲကိုကေပါတယ် အကြီး 1လုံး အသေး 1လုံး အကြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပတ်တယ် အသေးတော့ညီမလေးကိုပေးလိုက်တယ် ကိုယ်မှရည်းစားမရှိတာ ဟားဟားဟား နောက်ရေစိုခံတယ် အဲ့ဒါအာမခံပေးလို့ရတယ် ကိုယ်တိုင်လဲရေဝတ်ချိုးတယ် ရေကူးတယ် ဗူးလဲတော်တော်လေးမိုက်တယ် စုံတွဲနဲ့ပိုလိုက်မယ်လို့ထယ်တယ် ကျနော့အနေနဲ့လဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် ဒါကြောင့် review လာလုပ်ပေးဒါပါ နောက်ဝယ်သူအတွက်ပေါ့"
Sai Lin AungHsipaw
" ကျနော်သုံးလာတာ ၂ လ လောက်ရှိပြီးဗျ အခုသူငယ်ချင်းအတွက်နောက်ထပ် ၁စုံ ထပ်ဝယ်ပေးတာ ကြိုက်လို့ကြိုက်လို့ ကောင်းလဲကောင်းတယ် တန်လဲတန်တယ် ၂ လုံးတောင်ရတယ် ဗူးလဲမိုက်တယ်ဗျာ အသည်းပုံနဲ့ ရေစိုခံပိုင်းတော့အေးဆေးပဲ ကျနော်ဆိုင်ကယ်စီးတော့ခုတလော မိုးနေ့တိုင်းမိတယ် ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး နောက်ရေချိုးလဲမချွတ်ဘူး အကြမ်းတော်တော်ခံတယ် ညပိုင်းမီးလဲစိမ်းနေတာပဲ အားလုံးခြုံပြောရရင် ကိုကေ တယ်ဗျ"
" တန်မှတန် ဟားဟား အကိုမွေးနေ့အတွက်ဝယ်ပေးပါတယ် ကိုယ်ပါ ၁လုံးရသွားတယ် စုံတွဲမဟုတ်ပေမဲ့ အကိုနဲ့ညီမလဲပတ်လို့ရပါတယ် ၁ ပတ်လောက်ရှိပြီးဝတ်လာတာဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးရှင့် အကြီးဆိုဒ်တော့ အကို့ကိုလက်ဆောင်ပေးလို့တယ် အသေးဆိုဒ်ကတော့ ကိုယ်ယူလိုက်တာပေါ့ ဗူးလေးကြိုက်တယ် အသည်းပုံနဲ့ လက်ကောင့်နဲ့ အတော်ပဲရှင့် ညမီး အချိန်ကြည်ရတာလဲအဆင်ပြေပါတယ် "
" Online ဝယ်လာတာတခါမှ review မလုပ်ဖူးဘူး ဒီဆိုင်ကဝယ်တာလည်း ၂ခေါက်ရှိပြီး အခုမှလာလုပ်ပေးဖြစ်တာပါ အကြမ်းတော်တော်ခံတယ် ပျက်သွားမှာကိုမကြောက်ဘူး ကိုယ်သုံးဖူးတော့ စိတ်ချ နောက်ထွက်မဲ့မော်ဒယ်လ်လဲစောင့်နေပါတယ် "
စုစုပေါင်းဈေးနှုန်း 100,500 Ks ယနေ့ 53,000 Ks တည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်လို့ရပါပြီ !
တကယ်မမှာယူလိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီးအပျော်သဘောမျိုးအော်ဒါမလုပ်ပါနှင့်။ ဒီမော်ဒယ်လ်နာရီအရေအတွက်ကအကန့်သတ်ရှိသောကြောင့် ပစ္စည်းကိုတကယ်လိုချင်တဲ့သူအတွက်သာအော်ဒါစေချင်ပါသည်
C1 : အစိမ်းရင့်ရောင် (EP02XGR)C4 : အနက်ရောင် (EP02XBB)C6 : နက်ခဲရောင် (EP16XBL)